ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း: ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ဘယ်သူ ဖြစ်မလဲ ???
Friday, July 20, 2012 အိမ့်သံစဉ်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အတ္ထုပ္ပတ္တိ ဇာတ်ကားအတွက် သရုပ်ဆောင်များ ရွေးချယ်နေရာ ယနေ့ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက် နံနက် ၉ နာရီက တက္ကသိုလ် ရိပ်သာလမ်းနေအိမ်မှာ ဇကာတင်ရွေးချယ်ထားသူတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် လူတွေ့ မေးမြန်းမှု လုပ်ခဲ့ကြောင်း Bogyoke Aung San Movie ဖေ့စ်ဘုတ် စာမျက်နှာ မှာ ဖော်ပြ ထားပါတယ်။
ဇကာတင် ရွေးချယ်ထားတဲ့ ဗိုလ်ချပ်အောင်ဆန်း ဇာတ်ရုပ် နေရာ သရုပ်ဆောင်ရန် ရွေးချယ် ထားတဲ့ အမျိုးသား ၇ ဦးနဲ့ ဒေါ်ခင်ကြည်ဇာတ်ရုပ်နေရာ သရုပ်ဆောင်ရန် ရွေးချယ်ထားတဲ့ အမျိုးသမီး ၄ ဦးတို့ ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မေးမြန်း စစ်ဆေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်ကားဖြစ်မြောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူရွှင်တော် ကိုဇာဂနာ အပါအ၀င် ထင်ရှားတဲ့ အနုပညာရှင်တွေက
လည်း ၀ိုင်းဝန်းအားဖြည့် အကြံပြုကူညီနေကြပါတယ်။
အမျိုးသားရုပ်ရှင် ပိုင်ရှင် ဦးစိန်တင်၊ ဒေါ်မြသန်းနဲ့ သား ကျော်သူ (နာရေး ကူညီမှု အသင်း- ရန်ကုန် ) မိသားစုရဲ့ ရုပ်ရှင် ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေ ကို ဗိုလ်ချုပ် ရုပ်ရှင် ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် လှူဒါန်းခဲ့ရာ မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် လက်ခံရ ယူခဲ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရဲ့ မွေးနေ့ အသက် ၁၀၀ ပြည့် ဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ် မှာ အများပြည်သူ ကြည့်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားသွားမှာလို့လည်း သိရပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ရုပ်ရှင် ဖြစ်မြောက်ရေး နာယကအဖြစ် တာဝန်ယူ ထားတဲ့အတွက်ရယ် ဖခင်နဲ့ မိခင်တို့ရဲ့ ဇာတ်ရုပ်ကို ဘယ်သူနဲ့ ပို သင့်တော်မလည်းဆိုတာတွေ ကို သေချာ စစ်မေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ထင်ရှားတဲ့ ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒဓိက အပါအ၀င်၊ အနုပညာရှင်တွေနဲ့ စိတ်ဝင် စားသူတွေကလည်း ကျပ်ငွေ သိန်းပေါင် ရာနှင့် ချီ၍ လှူဒါန်းထားပါတယ်။
ရုပ်ရှင် ရိုက်ကွင်းနေရာကိုတော့ ပဲခူးတိုင်း အစိုးရအကြီးအကဲ တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ တချိန်က နို်င်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး
ဟောင်း ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပဲခူးမြို့အနီးက မြေဧက ၁၀၀ ကျော်ကို အသုံးပြုရန် ကမ်းလှမ်းထားတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ဇနီး ဒေါ်ခင်ကြည် ဘယ်သူ ဖြစ်မလဲ ???
ဓါတ်ပုံ ပေါ်ပြူလာ ဂျာနယ်